Iyo yakadzika 'ghost mhuri' PsyOp yekubvisa yako yese kusununguka uye kuunza 'pfungwa mapurisa' (chikamu 3): Martin Vrijland
Iyo yakadzika 'ghost mhuri' PsyOp yekubvisa yako yese kusununguka uye kuunza 'pfungwa mapurisa' (chikamu 3)
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 22 October 2019	• 10 Comments
Ghost mhuri, ghost baba, ghost mwanakomana. Ghost ghost ichazowanikwa mu ghost gadheni, nekuti iyo ghost nyaya inofanira kuramba ichifadza uye "yakavimbika". A PsyOp kuunza George Orwell mafungiro emapurisa uye kukwanisa kutarisa kumashure kwemasuo ese epamberi pasina warandi yekutsvaga. Iyo nyaya inoiswa mupfungwa dzako zuva nezuva naDe Telegraaf; pepanhau iro raitsigirawo hurumende iyo yakaita zvechisimba mu '40 /' 45. Uye iyo mutemo wekupamba iri kudzoka zvakare nhasi.
Kuti mutemo wekupamba unouya munguva pfupi wakazoonekwa munguva yekutanga Peacock kuparadzirwa nezvenyaya iyi yemweya. Janny Knol, mutevedzeri wemukuru wemapurisa (wechikadzi asingazivikanwe), akandiudza kuti mapurisa akambenge aenda kuprost ghost nekuti pane fungidziro yekuvapo kwekusakura kwemasora. Asi, akadaro, mapurisa akatadza kutarisa mukati, nekuti baba vemweya havana kuvatendera kupinda. Iwe unotoziva kuti mutemo mutsva uri kushandiswa pano unofanirwa kubvisa chipingamupinyi kuti utarise kumashure kwemusuwo wepamberi, saka isu zvakare tichagadzira nzvimbo yekupambwa munguva yazvino. Kutenderera uko munhu wese anozivisa mazano ekutsauka anogona kutorwa.
"Ah, Vrijland, hausi kuenda zvishoma zvishoma ikozvino? Iwe hausi kuenda kupenga zvishoma here?"Wakambobvunza iwo mubvunzo mumwechete nezve mishumo yenhau? Iwe unogara uchitsoropodza emari yakabhadharwa yekuona nemahara avo anobhadharwa kwazvo, ehe achigutsisa vaeni tafura; mhando saJeroen Pauw? "Zvakanaka, dzimwe nguva ivo vanonyanya kushora!"Hongu, ivo vanoita munzira vachikubvisa iwe kubva kunhema huru uye chichiita kuti nyaya yekutanga ienderere mberi. Hausati wazviziva here? Iyi nyaya yakazara ingangove isiri chinhu kunze kwekushanda kwepfungwa (PsyOp), sekunge mukati chikamu 1, chikamu 2 en chikamu 3 zvezvinyorwa zvangu. Zvingaite zvakanaka kana iwe ukaverenga izvo zvinyorwa uye migove, kuti pasava neanogona kuti:Wir haben es sahwira waishuwira".
Spooky mwanakomana Jan, iwe unoziva iye mwanakomana uyo akagogodza back 5 beers kuti asimudzire alarm hombe nezve "kusabvumidzwa zvisiri pamutemo kwekusununguka" nababa, ikozvino inotamba basa rekuisa iyo LGBTI ajenda pamepu. Nekuti isu pakarepo tine imwe yemisoro yakakosha, iyo iyo nyika inokupa iwe gare gare the psycholance inogona kukanda muchitokisi kuti ione. Semuenzaniso, kana uine chero chinopesana neye LGBTI propaganda muzvikoro zvepuraimari, iwe kubva ikozvino uchabatanidzwa kuna ghost baba kubva pane iyi ghost nyaya. Mushure mezvose, akabvisa vana vake kubva kuchikoro uye anga ari wehukama hwemurume nemukadzi. Izvi zvakajeka kubva pamavhidhiyo ake akanaka eakadzika, maererano naDe Telegraaf:
Izvo zvakajeka kubva mumharidzo dzaGerrit Jan van D. kuti maonero ake ndeekugwinya hutano. Sekureva kwa Mwari, murume anofanira kupinda muhukama nemukadzi. Kana iwe usingaite izvo, saka iwe uri mune 'yakasviba rudo', saka unomira mune zvomweya kusvika kumajasi ako mu 'mvura yegungwa', anodaro Van D. mune imwe yemharidzo dzake.
Chirongwa chakangwara uye chakapusa chatiri kupupurira. Baba Gerrit Jan (avo vari 'ghost baba') vane 'ghost maonero' uye sezviri pachena vane chimwe chinhu chinopesana neve ngochani. Uye izvozvo zvechokwadi ndizvo zvaikonzera mwanakomana Jan, uyo akarota zvekutizira kuCanada (kana anga atove ikoko, izvo hazvina kujeka, nekuti hapana chakajeka). Mufananidzo we PsyOp wakavezwa kuti baba vakada kudzidzisa vana heteronormatively uye kurega ghost mwanakomana Jan angangove ngochani. Jan aida kupunyuka kutonga kwababa "John Eagle", ndiye mufananidzo. Iye zvimwe akatodanana ne bartender muRuinerwold. Bartender uyu akanaka aimubatsira kufonera mapurisa.
Vanhu vacho vari kusheedzwa vakagadzirira kuunzwa kwaGeorge Orwell mapurisa ekufunga. Vashoma vanhu vechiDutch vanozopesana nazvo. Muchokwadi, vazhinji vanozoona zvakanaka kuti vanhu vane pfungwa dzakatsauka, semuenzaniso heteronormativity (ivo murume nomurume sezvavanoita) ndiwo maonero anovharirwa musasa rekudzidzira (GGZ kutarisira mupi). Uye nekuda kweizvozvo zviri nyore kwazvo kuti mapurisa haachada warandi yekutsvaga, asi anogona kungopinda. Baba Gerrit Jan vanonzi vauya nevana vavo kubva kuboka rechikoro repamba nekuti ivo vaizotevedzera mutemo wenyika. Izvi zvingangoratidza kuti vana vake vakadzidziswa LGBTI zvakajairika uye haana kubvumirana neizvi. Saka kana mune ramangwana iwe ukaona zvisina kukodzera kuti vana vako vari kusekondari vanofanirwa kuteerera kumambokadzi anovaudza kuti havazi mukomana kana musikana, asi kuti ivo vachiri vanogona kusarudza jenda ravo uye iwe utaure chimwe chinhu pamusoro pazvo, iwe uri munhu anogona kuramba. Iyi ghost yemhuri PsyOp yakatove nehanya neicho.
Saka tinoona kugadzirira kwemutemo wekupamba, asi nekuti hachichidaidzwazve uye nekuti vanhu vacho vanounzwa mumamiriro ekugamuchira kuburikidza nehurombo hwepfungwa, hapana anopokana kuunzwa kwemapurisa aya ekufunga nemitoo yake yekupamba.
Kufunga nezveHolland, ini ndinoona nzizi dzakakura dzichifamba zvishoma nezvishoma kupfuura munzvimbo dzakadzika dzisingaperi, mitsara yemisipiresi isingafungidzike yakamira seminhenga mirefu pakupera; uye munzvimbo yakakura yakasimwa mapurazi akapararira munyika, mapoka emiti, misha, shongwe dzezvipenga, machechi uye elms mune zvakakura mamiriro. mweya unorembera pasi uye zuva rinopfupiswa zvishoma nezvishoma mumapururu akacheneruka akapenya, uye mumatunhu ese izwi reTelegraaf rinombundirwa uye rinonzwika pasina kutsoropodzwa.
Source chinyorwa listings: nhamba.nl, assercourant.nl
Iyo yakadzika 'ghost mhuri' PsyOp yekubvisa yako yese kusununguka uye kuunza 'pfungwa mapurisa' (chikamu 2)
Tags: 1984, Dood, Eagle, Featured, kufunga mapurisa, mapurisa akafunga, George, akawanikwa, Janny Knol, John, operation, Orwell, mupfungwa, psyop, kubvuta, kupamba, razzia0 mutemo, mutemo wekupamba, Ruinerwold, ghost mhuri, gogo amai, ghost baba, ghost son, kushayikwa
Mumamiriro ezvinhu ezvisinganzwisisike uye spooky
Chakavanzika chinoshamisa chakakomberedza chinonzi kuponda kaviri? kubvira zvaakasungwa musungwa
nekuda kwekusangana kwemiviri isina hupenyu paMartin Luther KingLaan muDiemeti.
Chii chiri mubvunzo une musoro, sei vakawanikwa naani uye sei? , zvese zvinogara mune zvisingazivikanwe, spooky, akaremerwa imba mifananidzo.
Inotaridzika sechitsauko chechina chikamu chesipo, NL idiki.
Susupenzi haana kumbovhura musiwo pamwe nezvimwe uye nei pakanga pasina ma ambulensi, mushure mezvose zvaive zviviri !!! kuzvidemba pamusoro pevakafa, kumutsidzira uye nemibvunzo yakawanda ...
Ah, hongu yaive nguva zvakare yekutsva meseji muTelegraaf .. vaizochengeta ziso pane yangu Facebook nguva?
Chinyorwa chakaisirwa zvakanaka pamwechete:
(yakasununguka kuverenga muIncognito mode yeGoogle Chrome browser)
Mukufunga kwangu, hafu yechechi yeDutch anotenda kungirozi nemadhimoni. Muchokwadi, mabhiriyoni evanhu pasi anotenda kungirozi, madhimoni kana majini (maererano neIslam).
Izvo zvati takamirira nhepfenyuro inotevera yePauw apo nyanzvi yechitendero ichatsanangura kuti pfungwa dzaJohn Eagle dzaive dzakasiyana sei!
Peter R. aripi mune iyi nyaya? Haa hongu, izvo zvichaitwa zvichinzi kana kuongororwa kweDNA kuri kuitirwa amai vomweya! (asi ingoriwo pfungwa pamusoro pekuti kutaridzika kwe script kucharatidzika sei)
Keyboarde akanyora kuti:
Imwe yemafungiro angu mushure mekuverenga zvinyorwa zvichangoburwa pane ino webhusaiti:
Isu tese tinofanira kuona kuti, pakati pezvimwe zvinhu, kodzero dzinotevera hadzitorerwe kubva kwatiri, nekuti kodzero idzi dzinogara dzichityisidzirwa nevanhu uye masangano ari kutsvaga simba rakawanda nesimba.
- iyo kodzero yekuramba kutsvaga kweimba pasina kodhi yedare
- kurudyi kudzidzo yekumba (pamwe pasi pemamwe mamiriro ezvinhu)
- kodzero yekuramba vaccinations
- kodzero yekuzvidzivirira
- kodzero yevakuru vemafirimu muhofisi chero bedzi iwe usingavakanganise mune ravo basa
Asi pamusoro pezvose: kodzero 'yekufunga zvaunoda'
Kusvitswa kwemapurisa ekufunga.
Pfungwa iwe, murume akatenda "zvipoko." Vanenge 5 bhiriyoni vanhu vari munyika vanoita izvozvo. MaKristu ari kungirozi nemadhimoni, maMuslim ditto uye nemaEvangelical maKristu anotenda kuti Ishe vakatumira Mweya wake Mutsvene paPentekosti. Isu saka tine zororo reWhititsun.
Kuvonga nekuwedzera, kunogara kuchidzika kune izvo.
Wese munhu ane kodzero yekufunga / kutenda izvo zvaari kuda, pamwe nekodzero yekuita zvinoenderana, chero bedzi izvi zvisiri kutyora kodzero nerusununguko rwevamwe.
Pfungwa dzehunhu hadzina kuoma kune vanhu vanofunga, uye haufanirwe kubvumirana nemumwe muzvinyorwa.
Uye pamusoro pechinhu chenhau pacho pachacho, zvinosemesa kuti hukuru / hwakadzama hwekufukidzwa hwakadii, uye izvi zvinonyatsoratidza chinangwa chechokwadi. Kunyangwe iyi chinangwa chiri chekuvaraidza vanhu vakawandisa mumaawa emanheru, kana kukurudzira shanduko mumitemo, hachisi zano. Chokwadi chinoramba chiripo chekuti isu tinofanirwa kuchengetedza kodzero dzedu uye kuti uri kupokana nekuda kweizvi, ndinofunga ichi chinhu chakanaka.
tarisa kuti yagadziriswa, haifanire kuve vanhu vakaomarara. Ingo tora uongorore….
Zviitiko zvakakosha munguva pfupi yapfuura. Mazuva ano, mushure meiyo nyaya yaAnne Faber, mutongi akagashirazve yakafanana basa sechiremba wepfungwa. Makambani emabhizimusi akapihwa basa repamwe semapurisa ...
Amai van Ruinerwold havana kuvigwa, asi muchivande vakapisa maererano neTelegraaf, kuburikidza ne
Maererano neiyo telegraph
Iyo crematorium inoburitsa yakakosha faira, chii chatinofanira kuita ikoko zvakare?
na. Amai vacho havana kuvigwa, asi zvinoenderana nekristaro bhora reTelegraaf.
Kwete kuvigwa mubindu asi rakapiswa neinonzi "yakakosha faira".
Hatigone kuburitsa zvinhu, asi?
Vanhu vane maonero echiKristu paupenyu havawanzo kupisa nekuda kwekutenda ku 'kumabvazuva'.
Asi ivo vanoverenga neizvi, saka zvakamirira iyo inotevera spin ..
« Iyo yakadzika 'ghost mhuri' PsyOp yekubvisa yako yese kusununguka uye kuunza 'pfungwa mapurisa' (chikamu 2)
Nhema mireza yekurwisa London, Manchester, Paris, Barcelona uye Rotterdam pa 23 uye 24 Gumiguru? (UPDATE)) »
Total Visits: 13.756.569
Martin Vrijland op Ungamanikidza sei hurumende kuti dzichinje asi uchiramba vanhu?
Riffian op Nhanho yekutanga inonyora, iyo yechipiri nhanho kusasanganiswa: bhatani rekudzivirira
Sei uchida kuziva izvi? op Ungamanikidza sei hurumende kuti dzichinje asi uchiramba vanhu?